Etu esi achọta aesụ ma mee mmanụ a honeyụ na Minecraft | Nzukọ mkpanaka
Pablo sanchez | 24/09/2021 14:00 | Egwuregwu
Minecraft bụ otu n'ime egwuregwu ndị kachasị ewu ewu gburugburu ụwa, yana ọtụtụ nde ndị egwuregwu na -arụsi ọrụ ike. Otu n'ime igodo egwuregwu a bụ nnukwu eluigwe na ala ya, ebe anyị nwere ike na -achọpụta ihe ọhụrụ. Ọtụtụ ndị egwuregwu na -egwu aha a na -achọ ịmata aghụghọ gbasara ya. Nke a bụ ihe mere na aesụ na mmanụ a inụ na Minecraft.
Otu n'ime obi abụọ nke ọtụtụ ndị ọrụ na Minecraft bụ esi achọta aesụ iji mee mmanụ a honeyụ. Ọ bụrụ na ị na -egwu egwu wee hụ onwe gị n'ọnọdụ a, anyị nwere ozi ọma. Ọzọ anyị ga -egosi gị otu anyị ga -esi chọta aesụ n'egwuregwu a ma ama, ka anyị nwee ike ịme mmanụ a honeyụ.
Enwere ọtụtụ akụkụ nke anyị ga -eburu n'uche ka anyị nwee ike ịchọta a inụ n'ime egwuregwu ma mechaa mee mmanụ a honeyụ. Mgbe anyị malitere igwu egwu ma ọ bụ mgbe ohere a gosipụtara onwe ya, anyị anaghị ama mgbe niile otu esi eme ya, mana nke bụ eziokwu bụ na ọ bụ ihe dị nfe.
1 Ebe m ga -ahụ aesụ na Minecraft
2 Otu esi enweta mmanụ a honeyụ
3 Kedu ihe bụ mmanụ a forụ maka na Minecraft
4 Ojiji mmanụ a andụ na ogwe
5 Ndị na -enye mmanụ aeyụ
6 Otu esi akwagharị hives ma ọ bụ akwụ
Ebe m ga -ahụ aesụ na Minecraft
A na -ahụkarị aesụ na Minecraft na hives ma ọ bụ akwụ ma ọ na -ahụkarị ka ha na -efe efe ma ọ bụ na -anakọta mmanụ a honeyụ. Ọrụ anyị n'echiche a bụ inwe ike ịchọta ebe a na -ahụ hives ndị ahụ ebe ị bụ aesụ. Nke a na -amanye anyị ịchọ ha na biomes ụfọdụ n'ime egwuregwu a ma ama, ebe ọ bụ na ha anọghị.
Ọ bụ ihe amamihe ịga biomes ndị a: Ahịhịa sunflower, ahịhịa na ọhịa ifuru. N'ime biomes atọ a, anyị na -ahụ ezigbo osisi oak na osisi birch, nke nwere ohere 5% nke inwe mmanụ a honeyụ. Ọ bụ ezie na oke ọhịa ifuru na -abụkarị biome ebe anyị nwere ohere, ekele maka oke osisi na osisi ndị dị na ya, nke ga -enyere aka inwekwu a inụ n'ime ya. Inwe ọtụtụ osisi bụ ihe dị mma, maka na ọ ga -enyere a beụ aka imepụtakwu mmanụ a moreụ ngwa ngwa.
Nhọrọ ọzọ iji tụgharịa chọta aesụ na mmanụ a inụ na Minecraft bụ ịgbaso a beeụ. Nke ahụ bụ, ọ bụrụ na ịhụ mkpọtụ na biomes ọ bụla, naanị ị ga -eso ya ruo mgbe ọ ga -alaghachi n'akwụ ya ma ọ bụ ekwo ya. N'ụzọ dị otú a, ị ga -ahụ nnukwu ego n'ime ha wee nwee ike lekwasị anya na mmanụ a honeyụ, dịka ọmụmaatụ. Agbanyeghị na nke a ga -ekwe omume naanị ma ọ bụrụ na ihu igwe kwere ya, n'ihi na ọ naghị eme na ihu igwe adịghị mma ma ọ bụ ọ bụrụ n'abalị. Ịgbaso a toụ ruo ekwo ekwo ya dị mfe, mana ịhọrọ oge kwesịrị ekwesị iji mee ya dị mkpa.
Otu esi enweta mmanụ a honeyụ
Ọ bụrụ na anyị jisiri ike chọta aesụ na Minecraft, nzọụkwụ ọzọ bụ inweta mmanụ a honeyụ. Nzọụkwụ a dịtụ mfe karịa ịchọta a beụ. Naanị ihe anyị ga -eme n'okwu a bụ ubi na mmanụ a fromụ si efọk ma ọ bụ ekwo Ekwo nke aesụ anyị chọtara na biomes nke anyị nọ n'oge ahụ. N'ezie, nke a nwere ike ime naanị ma ọ bụrụ na a beụ zuru ezu alọghachila n'akwụ ma ọ bụ ekwo mmiri nwere pollen zuru ezu iji mepụta mmanụ a honeyụ.
Ebe obibi ọ bụla n'ime egwuregwu na -enwekarị a threeụ atọ. Otu ugboro n'ụbọchị, a eachụ ọ bụla ga -ahapụ ekwo a ka ọ na -emetọ okooko osisi dị iche iche na biomes nke ọ dị na ya. Mgbe ha mere nke a, ị ga -ahụ na ọdịdị a beeụ a ga -agbanwe wee kwadebe ịlaghachi azụ ebe ekwo ya nwayọ. Usoro a ga -emerịrị ugboro ise na mkpokọta na ọ bụ mgbe ahụ ka ị na -ahụ na ọdịdị nke ekwo ekwo na -agbanwe ntakịrị.
Agụụ ahụ ga -amalite ịmịcha mmanụ a honeyụ, nke bụ ihe na -egosi na anyị nwere ike nweta mmanụ a thisụ a. Mgbe nke a mere, naanị ihe anyị ga -eme bụ gaa ebe ekwo ekwo were karama iko. Nke a bụ ihe karama mmanụ a willụ ga -enye anyị mgbe ahụ. Site na usoro ndị a, anyị mechara nweta mmanụ a honeyụ na Minecraft, ekele maka ọrụ aesụ n'ime egwuregwu ahụ. Ọ bụrụ na anyị chọrọ inwe mmanụ a honeyụ dị ukwuu, anyị ga -emegharị usoro a ọtụtụ oge, ebe anyị na -ahụ hives na -atasị.
Ị nwere ike ịchọghị mmanụ a honeyụ na ekwo ekwo ahụ, mana ịchọrọ ogwe. Nke a bụ ihe anyị nwekwara ike nweta n'ụzọ dị mfe. Mgbe anyị rutere nso ekwo ekwo, ọ bụrụ na ihe anyị chọrọ bụ ogwe ndị ahụ, kama iji karama iko anyị ga -eji mkpa. Site na iji mkpa anyị ga -enwe ike nweta ogwe ndị a, nke na ụfọdụ dị ọtụtụ.
Kedu ihe bụ mmanụ a forụ maka na Minecraft
Ị nweta mmanụ a Mineụ na Minecraft mgbe ị gbasịrị a beụ bara uru na egwuregwu ahụ. Gịnị bụ mmanụ a honeyụ n'ezie maka egwuregwu? Anyị nwere ike iji mmanụ a honeyụ na akaụntụ anyị weghachi agụụ isii na saturation 2.4. Ke adianade do, mmanụ a alsoụ nwekwara ihe ngwọta, n'ihi ya, ọ ga -abụ nke ịba uru iji wepu mmetụta nsị na egwuregwu ahụ. Ọ bụrụ na anyị nọ na mmetụta nsi, mgbe ahụ anyị ga -ahụ karama mmanụ a thatụ anyị nwere ma jiri ya mee ihe, ka ewepu mmetụta ndị ahụ kpamkpam.
Ojiji mmanụ a andụ na ogwe
Dị ka ị hụburu, anyị nwere ike nweta mmanụ a orụ ma ọ bụ anyị nwere ike nweta ogwe mgbe anyị hụrụ ebe ekwo ekwo na Minecraft. Ndị a bụ ngwaahịa abụọ dị iche iche, nke ọ bụla nwere ihe dị iche, nke bụ ihe anyị ga -eburu n'uche mgbe niile, n'ihi na ụzọ iji ma ọ bụ imeso ha na egwuregwu ga -adị iche n'oge niile.
Mgbe agbazere mmanụ a honeyụ, enwere ike iji ya dịka ụdị nri ma ọ bụ dị ka ọgwụ, dị ka anyị kwuru na ngalaba nke bu ụzọ. Anyị ga -a drinkụ naanị mmanụ a fromụ na karama ma jiri uru ya mee otu a, mana n'ozuzu ya na -arụ ọrụ dị ka nri ọzọ na Minecraft. Na mgbakwunye, anyị ga -eburu n'uche na ọ bụrụ na anyị chọrọ, anyị nwekwara ohere ịgbanwe mmanụ a honeyụ ka ọ bụrụ shuga n'ime egwuregwu.
Ọ bụrụ na kama mmanụ a honeyụ, anyị enwetala ogwe Site na a beeụ bee na Minecraft, anyị na -ahụ ihe mejupụtara kama nri. Ogwe ndị ahụ bụ ihe anyị ga -eji mee ihe, na nke a, ihe a na -emekarị bụ ijikọta ogwe ndị a na ụdị osisi ọ bụla, ka anyị wee nwee ike wuo ekwo, nke ga -enye anyị mmanụ a atụ na oge niile. gbakwunyere. Ọ bụ ụzọ ịnweta mmanụ a ownụ nke anyị, nke anyị nwere ike iji mee ya.
Ndị na -enye mmanụ aeyụ
Ndị na -enye mmanụ aeyụ bụ ihe a hụrụ na ụdị Minecraft kacha ọhụrụ. Ndị a bụ ụfọdụ ngwa bara uru ga -eme na -ekwe ka akpaaka akpaaka nke ụdị ihe ọ liụ liụ ọ bụla. Nke ahụ bụ, ọ ga -eji ma mmiri ma mmanụ a workụ rụọ ọrụ, dịka ọmụmaatụ. Nke a bụ ihe ga -enyere anyị aka ime ka usoro ị nweta mmanụ a theụ dị mfe karịa, nke bụ ihe masịrị anyị niile.
Naanị ihe anyị ga -achọ n'okwu a bụ inwe ntakịrị ihe ọmụma gbasara okwute uhie, nke mere na ị ga -enwe ike ịmegharị ụdị usoro a nke ọma n'ugbo. Nke a na -eme ka o kwe omume ịnakọta na ịracha mmanụ a honeyụ na Minecraft na -enweghị ichere ma ọ bụ soro a inụ n'egwuregwu ahụ. Ọ bụ nhọrọ kacha atọ ụtọ ma ọ bụrụ na anyị na -eche ịnakọta mmanụ a honeyụ buru ibu na egwuregwu ahụ, ebe ọ ga -enyere anyị aka ịrụ obere ọrụ na usoro a wee nye anyị ohere ilekwasị anya n'ọrụ ndị ọzọ.
Na mgbakwunye, Minecraft na -enyekwa anyị ohere ịtụba isi n'ime ihe nkesa a, ka anyị nwee ike ịnakọta ogwe na -akpaghị aka. Ọ bụrụ na kama mmanụ a honeyụ ihe na -amasị anyị bụ inwe ogwe, anyị nwere ike banye n'otu usoro a, mana jiri naanị mkpa ahụ dị na ya.
Otu esi akwagharị hives ma ọ bụ akwụ
Ọ bụ ezie na a na -ekwu maka akwụ ma ọ bụ akpa a beụ na Minecraft, enweghị ezigbo ọdịiche dị n'etiti ha, ha abụọ ga -enye anyị ohere inweta mmanụ a honeyụ na ogwe. Naanị ezigbo ihe dị iche bụ na otu n'ime ha (akwu) bụ ihe sitere n'okike, ebe ekwo ekwo bụ ihe anyị nwere ike ịmepụta onwe anyị, dịka anyị gosipụtara na ngalaba ndị gara aga. Mana ọrụ nke ha abụọ bụ otu mgbe niile.
Enwere ike inwe oge mgbe ịchọrọ ịkwaga ekwo Ekwo ma ọ bụ akwụ na egwuregwu. Nke a bụ usoro siri ike, n'ihi na ị gaghị akpasu a theụ na -enye gị mmanụ a honeyụ. Iji kwaga ya n'enweghị nsogbu, na -enweghị iwe a theụ, ị ga -emerịrị ya jiri ngwá ọrụ nwere enchantment silk. Nke a ga -enye gị ohere ịnweta akwu ma ọ bụ ekwo a nke a fullụ jupụtara wee nwee ike ịkwaga ya na -enweghị mmanụ a honeyụ, ihe nwere ike ime na Minecraft. Iji anwansi a dị mkpa iji chekwaa ya.
Ọzọkwa, ị ga -agba mbọ hụ na etinye ọkụ n'okpuru akwụ ma ọ bụ ekwo Ekwo. Anwụrụ ọkụ na -enyere aka mee ka a relaxụ kwụsị, ka ha ghara isi n'ụlọ gị pụọ wee mee ka usoro a dị mfe.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nzukọ Ekwentị » Egwuregwu » Otu esi achọta aesụ ma mee mmanụ a honeyụ na Minecraft
Otu esi ehichapụ akaụntụ Samsung kpamkpam